Fanesoana karatra 11 hanentanana anao | Famoronana an-tserasera
Encarni Arcoya | 05/09/2021 17:02 | Nohavaozina amin'ny 05/09/2021 17:06 | maro
Un Fanesoana karatra orinasa fitaka ny fanahafana ny endrika noforoninao tamin'ny "tena fiainana." Satria izy ireo dia photomontages, dia mampiseho anao topi-maso, na amin'ny fomba virtoaly aza, ny fomba hampiharana ny asanao amin'ny endrika samihafa.
Amin'ny Internet dia afaka mahita maodely fanesoana karatra an'arivony an'arivony izahay fa tianay ny hanamora ny zava-drehetra ary nieritreritra ny hanangona ny safidin'izy ireo izahay ka tsy mila mitady azy ireo. Ny zavatra tsara dia afaka daholo izy ireo, ka tsy handany euro akory ianao. Ary koa amin'ny fananana safidy maro dia azonao atao ny mahita ny endrikao amin'ny endrika sy sary samihafa izay hanampy anao hamorona hevitra tsara kokoa raha ny vokatra nantenainao na raha mila manova zavatra ao ianao.
1 Ireo no fanesoana karatra orinasa tsara indrindra
1.1 Fanesoana amin'ny karatra feno
1.2 Fanesoana kanto
1.3 Fanesoana karatra orinasa
1.4 Karatra fandraharahana eo amin'ny fametahana akanjo
1.5 Fanesoana karatra
1.6 Drafitra maoderina sy kanto amin'ity fanesoana karatra fandraharahana ity
1.7 Ho an'ny mpamorona sary
1.8 Fanesoana ny karatra fandraharahana gravity zero
1.9 Karatra fandraharahana sisintany
1.10 Fametrahana mitsangana amin'ny fanesoana karatra orinasa
1.11 Karatra ara-barotra amin'ny fomba fijery
Ireo no fanesoana karatra orinasa tsara indrindra
Koa satria izahay te-hifantoka amin'ny fanomezana safidy fanesoana karatra maro anao, andao tonga dia tonga hatrany amin'ny resaka. Ka ahoana ny hijerenao an'ireo nofidianay?
Fanesoana amin'ny karatra feno
Rehefa asehonao ny famolavolana karatra fandraharahana, Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia manana sary roa ianao, ny iray eo alohany ary, raha azo atao, ny iray ao aoriana. Ary io dia amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia lafiny iray ihany no vita pirinty; fa afaka mamolavola azy roa ianao.
Noho izany, amin'ity fanoharana fanesoana ity dia afaka manana fahitana roa ianao, apetraka eo akaikin'ny iray hafa, mba hahitana azy amin'ny fomba fijery.
Mba hampisehoana ny aoriana sy ny eo aloha, dia misy ohatra iray hafa azonao ampiasaina. Mora be ny miara-miasa ary ny marina dia, ny zava-misy miseho mihantona ny karatra, manome ny "Tsy haiko hoe" izay manintona ny sary.
Araka ny hitanao, ny ampahany tsirairay amin'ny karatra dia averimberina mitovy isa ary afaka manome toerana bebe kokoa ny lamosina na ny eo aloha.
Azonao esorina izany eto.
Ahoana ny fanesoana karatra orinasa eny an-joron'ny rindrina? Mino izany na tsia, azo jerena tsara izy io, satria tsy hitovy amin'ny loko amin'ny gorodona sy ny rindrina. Raha ny marina, amin'ity tranga ity, ireo singa rehetra ireo dia mety miovaova loko, izay mahatonga azy io ho azo ampiasaina kokoa ary azonao ampiasaina indray isaky ny tianao.
Manana izany ianao hisintona eto.
Karatra fandraharahana eo amin'ny fametahana akanjo
Alao sary an-tsaina ny tadin'ny akanjo miaraka amin'ny paingony hazo. Ny zavatra mahazatra indrindra dia ny fieritreretanao akanjo fa tsy ny karatra fandraharahana hahantona amin'ireo sarimihetsika ireo, fa amin'ity tranga ity dia azonao atao ny mametraka ny karatra fandraharahana, na eo aloha na any aoriana (na raha tsy manana lamosina ianao, roa eo aloha hahatonga azy ireo ho tsara endrika kokoa).
Amin'ity tranga ity dia tsy hanome anao sary iray fotsiny izahay afaka manome anao manokana ny volanao, fa a fonosana 8 dia ny misintona ary hanome anao fomba fijery amin'ny lafiny maro amin'ny karatra, samy avy eo aloha sy any aoriana.
Drafitra maoderina sy kanto amin'ity fanesoana karatra fandraharahana ity
Amin'ity tranga ity, ity fanesoana karatra fandraharahana ity dia tena fototra. Izy io dia misy ambadika volondavenona izay, eo afovoan'ny sary, dia sakana iray karatra misy ny aloha eo amin'ny faritra fotsy sy ny aoriana ilay omena toerana ambony kokoa. Na mety toy izao ny tokony ho izy, tsy manolotra ny angon-drakitra "aloha" fa ny fanaovana an'io endrika manaitra io dia mijery anao hoe inona izany, ary ao ambadik'izany dia manana ny angona ianao.
Ho an'ny mpamorona sary
Fanarabiana iray mifantoka tanteraka amin'ireo mpamorona sary, fa koa amin'ireo rehetra miasa miaraka amin'ny solosaina (tonian-dahatsoratra, mpandika teny, sns.) Io endriny io dia tena izy. Miorina amin'ny fametrahana ny karatra amin'ny kitendry laptop hahitanao ny endriny.
Fanesoana ny karatra fandraharahana gravity zero
Alao an-tsaina ange fa manana antontan-taratasin'ny orinasa ianao ary atsipinao eny amin'ny habakabaka. Amin'izay fotoana izay dia maka sary ianao. Eny, satria tsy tianay ianao hanao izany amin'ny tena fiainana, indrindra satria tsy maintsy manangona azy rehetra ianao avy eo, dia manana izany fanesoana karatra fandraharahana izany ianao samy aseho ny eo aloha sy ny ao ambadiky ny karatra.
Karatra fandraharahana sisintany
Hanangana karatra fandraharahana misy sisintany ve ianao? Amin'ny ankapobeny, rehefa manana maro amin'izy ireo ianao dia mahita an'io sisiny io, raha tsy hoe manonta azy ireo matevina kokoa ianao ary vao mainka miharihary izany. Fa indraindray ny fakana sary an-tsaina ny endriny no olana. Raha tsy mahazo io fanesoana io ianao.
Miaraka aminy dia azonao atao ny mametraka ny karatrao nefa koa ovay ny loko sisin-tany mba hahitana izay safidy mety indrindra amin'ny tranga roa.
Fametrahana mitsangana amin'ny fanesoana karatra orinasa
Raha hivadika ny filaharan'ny karatrao ianao ary te hampiseho azy amin'ny tampony kokoa noho ny mitsivalana, ity fanesoana karatra fandraharahana ity dia afaka manampy anao hahita ny endriny. Ny sisa ataonao dia ny mametraka ny eo aloha sy aorianao ary hahitanao ny endriny.
Azonao atao ny manova mora ny mombamomba azy, amin'izay dia ho hitanao ny hoe io no notadiavinao na misy zavatra tokony hotadiavinao.
Karatra ara-barotra amin'ny fomba fijery
Fanesoana iray hafa izay tadiavina ny hakantony ary aseho fotsiny ny karatra dia ity iray ity. Miaraka amin'ny Miorina mainty kanto, manana ny fampisehoana ny karatra ianao, na eo aloha na any aoriana.
Ny tanjona dia ny hanome ny laharam-pahamehana an'io sary io, ary toa mivadika izy io fa afaka mihodina ianao, ka raha tokony hijery ny ankavia dia ataony miankavanana.
Araka ny hitanao, misy safidy maro amin'ny karatra fanesoana orinasa azonao andramana, ary maro hafa izay ao amin'ny Internet miandry ny hahitana azy. Ka raha tsy resy lahatra amin'ny iray amin'izy ireo ianao dia andramo ny fikarohana mba hahitana ilay mampiseho tsara indrindra ny volavolanao. Izany dia hanome ny mpanjifa fijery "tena misy" bebe kokoa ary hisorohana ny asa be loatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Fanesoana karatra fandraharahana 11 hanome aingam-panahy anao
Inona no zavatra iainan'ny mpampiasa ary inona no ataon'ny mpamorona UX